cusub 2.5T dabaq hoose jack ,Alaabadayadu waxay dhaafeen CE, GS& Shahaadada TUV ee Midowga Yurub. Tayada alaabtayadu waa run oo la isku halayn karo. Si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa suuqyada Yurub iyo Ameerika. Dhammaan alaabooyinka waxay qaataan rinjiyeynta ilaalinta deegaanka ee elektrostatic iyo - 45 ° saliid hydraulic, sidaas darteed waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa meelaha aadka u qabow. Fadlan nagu kalsoonow. Haddii aan doorano epont, waxaan sii wadi doonaa inaan samayno si ka sii wanagsan waxaanan sharad gelin doonaa 2.5T jack-hooseeya Alaabadayadu waxay dhaafeen CE, GS& Shahaadada TUV ee Midowga Yurub. Tayada alaabtayadu waa run oo la isku halayn karo. Si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa suuqyada Yurub iyo Ameerika. Dhammaan alaabooyinka waxay qaataan rinjiyeynta ilaalinta deegaanka ee elektrostatic iyo - 45 ° saliid biyo nadiif ah, sidaas darteed waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa meelaha aadka u qabow. Fadlan nagu kalsoonow. Haddii aan doorano epont, waxaan sii wadi doonaa inaan sameyno si ka sii wanaagsan oo ka sii wanaagsan